Kioba : Fampisehoana ny Nova Baire, fomba fitrandrahana ny Open-Source Operating system · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2009 12:18 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Deutsch, Italiano, Français, Español, বাংলা, srpski, 简体中文, 繁體中文, 日本語, bahasa Indonesia, English
Tamin'ny vokatry ny fikarohana natao tao amin'ny Anjerimanontolon'ny fampahafantarana sy ny Haitao eto La Havanne[es] (raikipohy UCI amin'ny teny espaniola) any Havane dia namoaka ny fomba fitrandrahana infôrmatika “open-source Linux operating system” azy manokana koa ny governemanta Kiobana. Antenain-dry zareo fa ovaina ho amin'io fomba fitrandrahana vaovao nomeny ny anarana hoe Nova Baire io ny 50% ny solosain'ny fanjakana izay nampiasa ny fomba fitrandrahana Microsoft Windows taloha. Hotanterahana izany ao anatin'ny 5 taona ho avy. Navoaka tamin'ny fomba ôfisialy izany tao amin'ny Informática 2009 International Convention and Fair( na fety [fampirantiana] sy fifanarahana kajimirindra 2009 iraisam-pirenena) .
“Tux Guevara” sarin'ny Brunocb mampiasa ny fahazoan-dalana Creative Commons
Nandeha tsikelikely ny fivelaran'ity Nova Baire ity noho ny fahasarotana eo amin'ny fahazoana rindrambaiko (logiciels) ara-dalàna any Kioba, ary koa, araka ny nosoratan'i ZeroZen ao amin'ny bolongana Latina-Amerikana antsoina hoe FayerWayer [es] , “tandindonin-doza i Kioba raha mampiasa ny fomba fitrandrahana MS (Microsoft) satria mety ho tafiditry ny sampam-pitsikilovana Amerikana ny kaody miafina”
Voalaza koa fa mifanaraka tsara amin'ny foto-pisainan'ny fanjakana Kiobana ity fomba fitrandrahana vaovao ity. Penúltimos Días [es] araka an'i Héctor Rodríguez, nanambara ny lehiben'ny departemanta mikarakara ity fomba fitrandrahana ity:
“Mifanaraka tsara amin'ny foto-pisainan’ vahoaka Kiobana ity fomba fitrandrahana vaovao ity, noho ny fahaleovantenany sy ny fiandrianany. Mety misy ambadika maizina sy kaody fetsifetsy mantsy ny logiciels tsy an'ny fanjakana ka tsy fantatra mihitsy”
Manana ny bolongana web azy manokana ny fomba fitrandrahana izay hahafahan'ny mpampiasa azy mamahana ny Nova Baire ary misy koa ny resaka an-tserasera ao amin'ny forum. Mpitoraka bilaogy iray, TBS ao amin'ny Bloggers Cuba [es] no efa nanandrana ny Nova Baire ary milaza ny heviny fohifohy:
Afaka nanandrana ny Nova Baire tamin'ny solosaina tsy tena izy izahay ary nahita fa mahaliana tokoa izy ity. Hitanao ao daholo izay tolotra rehetra ampiasaina ao amin'ny Linux : ny bureautique, ny mozika sy ny sary mihetsika, ny serasera amin'ny internet sy ny hafatra eo no ho eo, ny sary isan-karazany, sy ireo maro hafa ilaina momba ny asa sy ny fialam-boly.
manome fahafaham-po ireo mpampiasa azy ny tolotra ary mino aho fa tsy ho sarotra izany satria sady mora azo an-tsaina. Raha refesina amin'ny zava-misy dia azo ambara fa tsy hanana olana amin'ny fampiasana azy ity ireo rehetra efa zatra miasa amin'ny fomba fitrandrahana Microsoft Windows rehefa afindra amin'ny Open-Source Software izy.
Misy koa ny sary mihetsika afaka jerena izay nalaina tamin'ny fotoana nanandramana ny Nova Baire.